सैनिक भर्ना लेनदेनकाे व्यापारमा, घुस्याहा सैन्य हिरासतबाटै गायब ! - सैनिक भर्ना लेनदेनकाे व्यापारमा, घुस्याहा सैन्य हिरासतबाटै गायब !
सैनिक भर्ना लेनदेनकाे व्यापारमा, घुस्याहा सैन्य हिरासतबाटै गायब !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ४ श्रावण, 10:41:09 AM
काठमाडौं । नेपाली सेनाभित्र थुप्रै घोटालाकाण्ड हुने गरेपनि सकभर बाहिर आउदैन । अरबौको बजेट हुने नेपाली सेनामा बिना प्रतिस्पर्धा करोडौको विकासनिमार्णका काम कोटेशनका आधारमा हुने गरेको कथा पनि नौलो होइन ।
सेनाको सरुवा वढुवा होस् वा विदेश मिशन ,सबैमा सेनाका जरसाबहरुको तजबीजी अधिकार चल्ने गरेको छ अर्थात त्यहाँभित्रका कुनैपनि काम कारवाही पारदर्शी हुने गरेको छैन्। नत अख्तियारको छानविनको दायरामा पर्ने डर ,नत सर्तकता केन्द्रले केही लछारपाटो लगाउने डर भएपछि जे गरेपनि हुने नै भयौ । हुदाँ हुदाँ अब प्रहरीमा जस्तै सैनिक भर्नामा समेत लेनदेन हुन थालेपछि नेपाली सेना थप विवादमा पर्न थालेको छ ।
यतिबेला सेनामा सयौंको संख्यामा सैनिक जवानको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । यही मेसोमा सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय विवादमा तानिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार योग्य भएपनि सोझासिधा युवालाई फालेर भर्ना छनौटमा मोटो रकम दिनेलाई पास गराउने गिरोहको भण्डाफोर भएको छ । भर्ना छनौटमा अन्याय र ब्यापक धाँधली हुने गुनासो बढेपछि सैनिक सचिवालयले सम्बन्धित ब्यक्तिहरुमाथि छानविन सुरु गरेको बताईएको छ ।
नेपाली सेनाको भर्ना छनौटका सम्बन्धमा धेरै जनगुनासो बढेपछि प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सत्यतथ्य बुझेर सैनिक ऐनको आधारमा कडाभन्दा कडा अनुशासनको कारवाही गर्नका लागि सहायक रथी ‘जर्नेल’ सीताराम खड्काको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेका छन् । सैनिक ऐनको दफा ५०,५१,५२ को उपदफाहरुविरुद्धको कार्य गरेर सैन्य अनुशासन उल्लंघन गर्ने केही अधिकृत, हुद्दा र सिपाहीलाई हिरासतमा लिएर छानविन सुरु गरिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
सैनिक स्रोतका अनुसार, भर्ना छनौटमा अनियमिता र सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा दुई जना मेजरलाई समेत हिरासतमा लिएर छानविन थालिएको छ । छानविनमा परेका मेजरहरुमा कृष्ण सापकोटा र प्रकाश केसी रहेको बताईएको छ ।
सैनिक स्रोतका अनुसार, नेपाली सेनाको एमटीमा जागिर खाएर इन्जिनियर विभागमा हुद्दामा नाम निकाल्न सफल चतुर सिपाही नवराज गुरुङको सेटिंग र चलखेलमा भर्ना छनौटमा करोडौं असुलीको काण्ड भएको आशंका गरिएको छ । भर्ना छनौटमा प्रति सिपाही भर्ना गर्दा रु. ३ लाखका दरले घुस असुलेको र सेटिंगमा काम गरेको आरोपमा प्राविधिक हबल्दार नवराज गुरुङ्ग केही दिनअघि पक्राउ परेर सैनिक हिरासतमा रहेका थिए ।
विचित्र र रहस्यमय घटना चाहिं के भयो भने सैनिक हिरासतमा रहेका हबल्दार गुरुङ्ग हिरासतबाटै एकाएक गायब भए । स्रोतका अनुसार, प्राविधिक हबल्दार नवराज भर्ना छनौटको समयमा सेटिङ मिलाएर करोडौं असुल्ने र घुसको तुजुकमा सैनिक अफिसरहरुलाई औंलामा नचाउने गर्दथे । भर्ना छनौटका मेजरलाई साँढे चारलाख पर्ने बुलेट मोटरसाइकल उपहार दिने हैसियत बनाएका प्राविधिक हबल्दार नवराजले हाकिमहरुसँग काम पट्याएर भर्नामा घुस असुल्दै आएका थिए ।
यी धूर्त, चतुर खेलाडी हबल्दार नवराज गुरुङ्गले सैनिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै निजी ब्यवसाय समेत संचालन गर्दै आएका थिए । स्वयम्भुमा ड्राइभिङ्ग सेन्टर खोलेर आर्मीमा ड्राइभर भर्ना गर्दा लाखौ घुस असुल्दै आएका हबल्दार गुरुङ्ग राजेन्द्र क्षत्रीका उच्च व्यक्तिको प्रिय पात्र भएको दावी सैनिक स्रोतको छ ।
एकजना जरसाबको प्रियपात्र भएपछि हबल्दार गुरुङ्गले कार्यालयमा समेत कुनै काम गर्नु पर्दैनथ्यो । हबल्दार गुरुङ्ग सेनाभित्र विभिन्न किसिमको सेटिंग मिलाउन र ग्राहक खोज्न आफ्नो ग्यांग परिचालन गरेर निजी काममा बाहिररबाहिरै हिंड्ने गर्दथे । हबल्दार गुरुङ्गको असुली ग्याङ्गमा अर्का ब्यक्ति थिए, सिपाही बसन्त थापा मगर । यी सिपाही थापा मगर भने अहिले सैन्य हिरासतमा रहेको थाहा भएको छ ।
जंगी अड्डाको हिरासतबाटै भाग्न सफल गुरुङ कसरी भाग्न सफल भयो भन्ने तथ्यसत्य पत्तो लगाउन महासेनानी प्रकाश जंग कार्कीलाई जिम्मा दिइएको छ । एमटीमा ड्राइभर भर्ना, सिपाही भर्नामा सेटिंग मिलाएर करोड असुली गर्ने हबल्दार गुरुङ्गलाई कसले के स्वार्थमा कसरी भगायो ? अहिले कहाँ पुग्यो नेपाली सेनाले कुनै अत्तोपत्तो पाउन नसकेको सैनिक स्रोत बताउछ ।
नेपाली सेनाको संगठनलाई बद्नाम गर्ने प्राविधिक हबल्दार गुरुङ्गको सेटिंगमा कुन तहसम्मका अधिकृतहरु र को को संलग्न थिए भन्ने तथ्य खोजेर कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर भर्ना छनौटलाई धाँधलीरहित बनाउन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले विशेष चासो लिनुपर्ने माग पीडितहरुले गरेका छन् ।
२०७५, ४ श्रावण, 10:41:09 AM